Mayelana NATHI - Wuxi Yaqin Commercial And Trading Co., Ltd.
Isungulwe ngo-2008, iWuxi Yaqin Grinding Tools co., Ltd. iyinkampani yokuhweba yobungcweti etholakala efektri ebikhethekile ekukhiqizeni izinto zokwakha sanding nemishini yokugaya.
Ibhizinisi lethu eliyinhloko: ukukhiqizwa kobungcweti bezingcezu ze-nail drill, izigqoko ze-sanding, amabhande we-sanding, imishini ye-nail namanye amathuluzi we-nail. Imikhiqizo yethu ithandwa ethengiswa e-USA, Russia, France, UK, Ukraine, Germany, Italy, njll.
amabhizinisi ahlanganisiwe nezimboni, aqinisekisa inani lakho
Ochwepheshe abangochwepheshe nabathengisi
Uhlome ngethimba langemva kokuthengisa
Uzibophezele ekubeni ngumlingani wakho webhizinisi olithandayo
Iminyaka engu-13 yesipiliyoni sobuchwepheshe kumathuluzi okugaya
Ukuthumela okusheshayo nokuzinzile
I-Wuxi Yaqin Grinding Tools Co., Ltd ibilokhu ikhethekile ekukhiqizeni izinto zokwakha sanding nezinto zokugaya iminyaka engu-13. Imboni yethu itholakala e-xinghua, indawo yesitshalo ingamamitha-skwele ayi-2000, sinabachwepheshe abaphambili kakhulu nemishini yokukhiqiza.
Ngakho-ke, ithole isipiliyoni seMboni, i-Yaqin iqongelele inani elikhulu labathengi abathembekile basekhaya ngekhwalithi ephezulu ephezulu nentengo ephansi.
Ngumhlinzeki wezinkampani eziningi zokuhweba zangaphandle eChina. Sihlose ukuhlinzeka amakhasimende ethu ngemikhiqizo nezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme.
Eminyakeni emibili edlule, ukuba khona kwalo mbukiso kuphinde kwanika iYaqin ithuba lokuvuna inqwaba yothando lwaBathengi bangaphandle, ukunconywa nokuthengwa kabusha kwabathengi nakho kwenza uYaqin wazimisela kakhulu ukuya phesheya.
Sinokuphathwa kwekhwalithi ephezulu, unjiniyela wezobuchwepheshe oqeqeshiwe kanye neqembu labasebenzi ekukhiqizeni. Siphakela i-OEM ne-ODM, sinikezela ngensizakalo eyenziwe ngezifiso yokuklama, ukukhiqiza nokuthumela.
Imikhiqizo yethu ithunyelwa kakhulu e-United States, Russia, Ukraine, Britain, Brazil, Israel, Mexico, Poland, Italy, Germany, Vietnam, njll.
Njengophawu lukaYaqin, inhloso kaYaqin ukwamukela umhlaba futhi uvumele imikhiqizo yawo isabalale kuwo wonke amagumbi omhlaba!
Amagugu ayisisekelo kaJaqin "NGOKWETHEMBEKA NOKUSUNGULA", okuyisisekelo esiyisisekelo se-Yaqin's General Business Principles iminyaka eyi-13 futhi asahlala ebaluleke njengakuqala.
Siphumelela ukwethenjwa nokudunyiswa okuvela kumakhasimende ethu, futhi sesisungule ubudlelwane obuhle besikhathi eside bokubambisana.
Kusukela ngo-2008, Inkampani yethu ibambe iqhaza emibukisweni engaphezu kuka-50 yasekhaya noma yangaphandle, efana ne-InterCharm Ukraine, iCosmoprof North America, iCosmoprof bologna, i-Beauty Duesseldorf, i-Intercham Russia, i-Guangzhou Beauty Expo, njll.